Ny fizahantany Mongoliana dia mandefa sehatra Internet vaovao ao amin'ny ITB Berlin
Home » Travel Technology News » Ny fizahantany Mongoliana dia mandefa sehatra Internet vaovao ao amin'ny ITB Berlin
Mongolia.travel, fitaovana fandrindrana fifandraisana ho an'ny mpandeha dia nampidirina voalohany tao amin'ny ITB Berlin, foara fizahan-tany lehibe indrindra manerantany.
Raha i Mongolia dia manome fahitana matanjaka ho an'ny ankamaroan'ireo mpandeha manana anarana malaza toa an'i Genghis Khan na ny Desy Gobi, ny ankamaroan'ny mpizahatany dia mbola tsy nahatakatra ireo zava-mahatalanjona miafina sy hita ao amin'ny habakabaka sy ambanivohitra ao amin'ny firenena.
Mba hampahalala bebe kokoa an'i Mongolia, sady manome fitaovana marina ho an'ireo mpandeha maniry ny handamina ny dia ho iray amin'ireo 'sisintany farany' an'ny fizahan-tany, ny Ministeran'ny Tontolo iainana sy ny fizahan-tany Mongolia dia nametraka tranokala fifandraisana vaovao izay tsy ho ela dia ho azon'ny besinimaro atolotra ny URL www.Mongolia.travel.
Ny tena tanjon'ity sehatra vaovao ity dia ny famokarana 'fitsangatsanganan'ny mpitsidika amin'ny alàlan'ny fiandrasana sy fampiasana ny fanirian'ny mpitsidika ny sehatra. Ny fampahalalana momba ny fitsangatsanganana foto-kevitra, vavahady namboarina ho an'ireo mpandeha voalohany, làlan-kaleha, ary fitsangatsanganana isam-paritra dia anisan'ny sori-dalana atolotra ao anatin'ny sehatra Mongolia.
Ny tantara sy ny zavatra niainana tsirairay nasongadina teo amin'ny lampihazo dia hifandray amin'ireo sampana misy atiny ambany, hanomezana mpizaha tany mety ho traikefa mifandray tanteraka. Ny vavahady ifanakalozana dia misy amin'ny alàlan'ny pejy fampidinana an-tserasera izay hitarika ireo mpitsidika tranonkala amin'ny alàlan'ny 'dia' mifototra amin'ny satan'izy ireo, ny filany ary ny zavatra mahaliana azy ireo.
“Ny sehatra dia novolavolaina hanampiana ny mpizahatany eran'izao tontolo izao hahita sy hijery ny kolontsaina, ny tantara, ny zavatra manintona ary ny traikefa an'i Mongolia amin'ny alàlan'ny fitantarana tantara manaitaitra. Tsy ny fampisehoana an'i Mongolia fotsiny no ao afovoany avaratra atsinanan'i Azia, fa amin'ny alàlan'ny famoahana traikefa marobe, Mongolia.travel koa dia mampiseho ny fomba ahafahantsika miara-miasa amin'ireo orinasantsika sy vondrom-piarahamonintsika eo an-toerana mba hanomezana fampahalalana tsara indrindra sy be mpampiasa indrindra amin'ny mpandeha, "hoy ny fanazavany. Minisitry ny tontolo iainana sy fizahan-tany Mongolia HE Namsrai Tserenbat.
Afaka mitsindry lahatsoratra sy sary isan-karazany ireo mpitsidika ny sehatra Mongolia avy eo, mamolavola zotra tsy manam-paharoa amin'ny alàlan'ny traikefa nasongadina, atiny media sosialy, tantara ary ivon-toerana mahaliana indrindra. Ny fanamafisana manokana dia napetraka ao amin'ny tondrozotra 'Mpandeha Fotoana Voalohany', izay hita ao amin'ny pejin-tsoratry ny lampihazo. Ao anatiny dia hiseho tsirairay ireo sary misy zava-misy tsy fantatra momba ny firenena.
Ny pejy lohahevitra natokana dia ahitana fampahalalana momba ny fety, hetsiky ny mpianakavy, fijerena vorona, natiora, fitsangatsanganana, tantara sy kolontsaina, gastronomie, fizahan-tany miorina amin'ny fiarahamonina ary fizahan-tany bodista.
Fizarana iray hafa no hitarika ireo mpitsidika amin'ny faritry ny distrika. Ho fanampin'izay, ny sehatra dia hanome fampahalalana tena ilaina ihany koa ho an'ireo mpandeha liana, toy ny fampahalalana momba ny visa, fampahalalana momba ny dia, fitaterana an-toerana, toetrandro, vola, fiteny ary maro hafa.
Ny sehatra Mongolia koa dia hanome hery ireo orinasa eo an-toerana handray anjara mavitrika amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny teknolojia ara-tsosialy ENWOKE.
ENWOKE, ampiasan'ny Chameleon Strategies, dia mamela ny orinasa eo an-toerana hampiasa Mongolia.travel hanolotra ny vokatr'izy ireo, hamorona tolotra sy atiny manokana ary koa hampiditra ny sakafom-baovaon'izy ireo manokana ao anatin'ny sehatra.
Sekretera momba ny fizahantany any Kenya: mpitsidika bebe kokoa ary elefanta maty vitsy
I Jamaika no tanjon'ny PATWA amin'ny taona